musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Hawaii Inozivisa Nyowani Kuputika kweKuputika
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • HITA • nhau • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now • USA Kuputsa Nhau
Kuputika kweHawaii kuputika
Panenge pa3: 20pm Hawaii Nguva Yakatarwa (HST) nhasi, Chitatu, Gunyana 29, 2021, kuputika kwakatanga mukati meHalema'uma'u crater muKīlauea's summit caldera, mukati meHawai'i Volcanoes National Park.
Mafissure akavhurika mukati megungwa rekare rebota mucrater kumabvazuva uye iri kugadzira kuyerera kwemvura pamusoro pegungwa.
Imwe nzvimbo yakavhurwa kuma4: 43pm nhasi kumadziro ekumadokero kweHalema'uma'u crater.
Hawaiian Volcano Observatory yakasimudza mwero wekusvinura kubva kuorenji kuenda kutsvuku, zvichireva kuti kuputika kwegomo kwave iko zvino kuri kuraira kwekurinda.
Zvipenga zvakavhurwa kumabvazuva kwechitsuwa chikuru mukati megungwa re lava raive richishanda mukati Halema'uma'u mupengo kubva Zvita 2020 kusvika Chivabvu 2021, uye ivo vari kugadzira mabota anoyerera pamusoro penzvimbo yedziva rekare.
Panenge pa4: 43pm HST, imwe nzvimbo yakavhurwa kumadziro ekumadokero kweHalema'uma'u crater.
YeHawaiian Volcano Observatory yakatumira 3:40 pm pikicha yemabota mugomba munguva pfupi mushure mekusimudza mwero wekuzivisa wegomo iri kune wachi kubva kune chipangamazano.
Sekureva kweHawaiian Volcano Observatory, masikati ano akaunza kuwedzerwa kushanduka kwevhu uye kuita kwekuvhunduka. Iyo yambiro yambiro yakasimudzwa kubva kuorenji kuenda kune tsvuku (yambiro) kuma4: 00 pm Kutenderedza kwepasi kunosvika gumi nemanomwe kwakanyorwa neUS Geological Survey (USGS) muhukuru hwe 17-2.5 mumaawa makumi maviri nemana apfuura.
Nekuputika kuri kuve kuzere mukati meHalema'uma'u crater, parizvino hapana zvekutyisidzira kunzvimbo dzinogara vanhu. Vakuru vanozoongorora chiitiko ichi pamwe nenjodzi dzinogona kuitika sezvo kuputika kuri kuenderera.
Hawaii Shira akagovana pa twitter isingasviki hafu yeawa yapfuura: Mwanakomana wangu akati aona kuwedzera kwesulfure dioxide kunhuwirira paakaenda kunotora [mwanakomana] wake kuVolcano Charter School masikati ano.
Nguva yekupedzisira Kilauea payakaputika ndipo payakatanga muna Zvita 2020. Yakaramba ichingoburitsa mabota kusvika muna Chivabvu 2021. Kuputika ikoko kwakagadzira dziva nyowani pamusangano wecrater.
Munguva iyo yaipedzisira kushanda, Kilauea yakagadzira anopfuura mamirioni makumi mana emamiriyoni emamita, kana marita gumi nemamiriyoni, emarara mukati memazuva gumi nematanhatu yaigara ichiputika.
Lava yakanga yabuda munzvimbo imwechete iyoyo muna 2018 apo Kilauea yakaputika mune imwe yenzvimbo dzayo dzezasi. Kuputika ikoko kwakange kwakakura kupfuura kwese kwambonyorwa kusvika paripano. Yakaparadza misha yakawanda uye yakasiya zviuru zvevanhu.